Direct Square ny Square Sodina Mill - China Shijiazhuang Zhongtai Sodina
Izany dia mivantana hakodian'ny olona ny vy sy manenjana azy esory ny Kianja & mahitsizoro endrika, dia Weld izany mba hamita ny fananganana.
Toetra sy ny Lafitsara:
1) Ampitahao amin'ny manodidina ho efamira & mahitsi- namorona lalana, izany no tsara ho amin'ny endriky teo an-tsisin'ny hazo fijaliana fizarana, azo lazaina, semi-savaivony ny anaty Arc dia kely, ary ny molony dia fisaka, fomba fijery dia tsy tapaka.
2) Ny andalana rehetra entana dia ambany, indrindra fa ny sizing faritra.
3) Ny sakany ny vy dia esory kely momba ny 2.4-3% noho ny manodidina an-kianja & mahitsi-, dia mety afa-tsy ny lanin'ny fitaovana ny manta.
4) hifanaraka ny multi-teboka hiondrika lalana, tsy ny hery sy ny lafiny axial abrasion, hampihenana ny fananganana dingana hahazoana antoka raha ny toetra, mandritra izany dia mampihena ny hery sy ny wastage-roller abrasion.
5) hifanaraka ny mitambatra karazana-roller amin'ny ankamaroan'ny ny fitoeran-tavin, dia hahatsapa fa iray hametraka ny-roller dia afaka mamokatra am-polony ny efamira & mahitsi- sodina amin'ny hafa famaritana, dia mihena ny fivarotana ny-roller, ambany ny vidiny tokony ho 80% amin'ny-roller, mafy ny bankroll turnover, fohy ny fotoana nanaovana vokatra vaovao iray.
70-200 70 × 90 × 200 × 150 × 50-250
120 × 120-300 300 × 140 × 200 × 100-400
170 × 170-400 400 × 200 × 300 × 150-500
200 × 200-500 500 × 250 × 400 × 150-600
Previous: Hafainganam-pandeha avo Sodina Mill
Next: Stainless Steel Sodina Mill
Haingon-trano Sodina Mill
Direct Square To Square Sodina Mill
nandrisika Sodina Mill
Frequency avo Sodina Mill
High Frequency Welding Sodina Mill
High fametrahana mazava Tube Mill
High Speed Sodina Mill
Iron Sodina Mill
Multi-Functional sodina Mill
Sodina Ary Tube Mill
Sodina Mill For Sale
Mill sodina Lasitra
Sodina Mill lasitra Rollers
Sodina Rolling Mill Machine
Sodina Welding Mill
Sodina Square Machine
Sodina Square milina
Square Sodina Manao Machine
Sodina Square Mill
Square Sodina Production-dalana
Square Steel Sodina Manao Machine
Square Tube milina
Square Tube Ny fanaovantsika Machine
Square Tube Production-dalana,
SS Sodina Mill
Imahitsy Seam Tube Mill
Straight Seam welded Sodina Mill
tahaka ny fantsom Mill Factory Prices
Weld sodina Production Mill
Welded Sodina Cold Roll teo aloha Mill
Welding Sodina Mill